VA - Shwe FM 6th Anniversary [2015 Album] MP3 320Kbps! - Mg Shan Lay
Home ၀န 320 Kbps! Album G Fatt High Quality Various Artists နီနီခင်​ဇော် လွှမ်းပိုင် အိမ့်ချစ် ​ဝေလ VA - Shwe FM 6th Anniversary [2015 Album] MP3 320Kbps!
VA - Shwe FM 6th Anniversary [2015 Album] MP3 320Kbps!
1:02:00 PM ၀န, 320 Kbps!, Album, G Fatt, High Quality, Various Artists, နီနီခင်​ဇော်, လွှမ်းပိုင်, အိမ့်ချစ်, ​ဝေလ,
1. ပ​တေးတိုး - ရဲရင့်​အောင်
2. ည​နေမျက်ရည် - ​ဝေလ
3. မုန်း​မေ့ဖို့မလွယ် - နီနီခင်​ဇော်
4. မမ​ဝေဒနာ - လွှမ်းပိုင်
5. မင်းအနား - ၀န
6. Will You Marry Me - ရဲ​လေး
7. လူလူချင်းပဲ - ​ရွှေထူး ၊ မိစန္ဒီ
8. ငိုတတ်ပြီ - သာဒီးလူ
9. မင်းသမီးနဲ့ ကျွန်​တော် - Gfatt, အိမ့်ချစ်
10. မင်းမရှိတဲ့​နောက် - နန်းမြတ်၊ နန်းသူဇာ
11. ချစ်သူ့လက်​ဆောင် - Lလွန်းဝါ
12. အရင်ကလိုမျိုး - ထွန်းထွန်း
13. မင်း​ကြောင့် - လိမ်​မော်သီး၊​မေမြတ်နိုး
14. နားလည်​ပေးပါ - ဟဲ​လေး၊ ဒီယံ၊ အစ္စဏီ၊ Ah Boy
15. ​ဝေးများ​ဝေးရင် - ဆန်းသစ်လ
Tags # ၀န # 320 Kbps! # Album # G Fatt # High Quality # Various Artists # နီနီခင်​ဇော် # လွှမ်းပိုင် # အိမ့်ချစ် # ​ဝေလ
Labels: ၀န, 320 Kbps!, Album, G Fatt, High Quality, Various Artists, နီနီခင်​ဇော်, လွှမ်းပိုင်, အိမ့်ချစ်, ​ဝေလ
Naung Naung February 24, 2016 at 11:24 PM
Shwe fm6 anniversary က အကုန်​မပါဘူးလာ?